Fumana apha | Tyelela uHultsfred
ekhaya » Fumana apha
Umasipala waseHultsfred ubekwe eSmaland nakwimpuma yeSweden. Ungaya kwiVimmerby nakwiHlabathi lika-Astrid Lindgren kwisithuba esingaphantsi kwesiqingatha seyure. Ufikelela kubukumkani beglasi kwithuba elingaphezu kweyure.
Kukuthatha ngaphantsi kweeyure ezintathu nesiqingatha ukuqhuba usuka eStockholm, eGothenburg okanye eMalmö usiya eHultsfred.
I-Linköping, iJönköping, iVäxjö kunye neKalmar zizixeko ezikhulu ezikhulu. Kwezi kuthatha malunga neyure enesiqingatha ngemoto. IKalmar imi ngaselwandle kwaye ukuba ufuna ukuya e-Öland, kuthatha ngaphantsi kwesiqingatha seyure ukuqhubeka.
Ungathatha uloliwe oya eHultsfred. Sinonxibelelwano ne-Linkoping kunye neKalmar.
Isikhululo seenqwelomoya esikufutshane sinokufumaneka eVäxjö, Kalmar, Linkoping okanye eJönköping.